डेंगु र स्क्रब टाइफसको संक्रमणले देश आक्रान्त भइरहँदा स्वास्थ्य मन्त्री विदेश भ्रमणमा मस्त ! « Media Club Nepal
७ आश्विन २०७६, मंगलवार १९:१२
डेंगु र स्क्रब टाइफसको संक्रमणले देश आक्रान्त भइरहँदा स्वास्थ्य मन्त्री विदेश भ्रमणमा मस्त !
प्रकाशित मिति : ७ आश्विन २०७६, मंगलवार १९:१२
डेंगु रोग नियन्त्रणमा आइनसक्दै नेपालका ६१ जिल्लामा त्यो भन्दा पनि बढी मृत्युदर भएको अर्को रोग स्क्रब टाइफस फैलिएको छ । डेंगुभन्दा ३० गुणा बढी मृत्युदर भएको स्क्रब टाइफसका बिरामी ६१ जिल्लामा देखिएको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ ।
स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको तथ्यांकअनुसार साउनदेखि हालसम्म ६ सय ९५ जनामा स्क्रब टाइफस देखिएको छ । स्क्रब टाइफसका कारण हालसम्म ४ जनाको मृत्यु भएको भनिए पनि महाशाखाले भने मृतकको संख्या भने सार्वजनिक गरेको छैन ।
अस्पतालहरूमा अहिले डेंगीसँगै स्क्रब टाइफस लगायतका बिरामीको चाप बढिरहेको छ । तर नेपाल सरकारका स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादव भने देशमा परेको ‘डेंगी, स्क्रबटाइफस’ को स्वास्थ्य संकटलाई सामान्य भएको वक्तव्य दिँदै लगातार विदेश भ्रमणमा छन् ।
देश डेंगी र इक्रबटाइफस, जिका र चिकनगुनियाको उच्च जोखिममा परेका बेला त्यसलाई बेवास्ता गर्दै स्वास्थ्यमन्त्री यादव अक्टोबर १ सम्मका लागि अमेरिका भ्रमणमा छन् ।
महाशाखाको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार यो रोग सबैभन्दा बढी प्रदेश नम्बर ५ मा देखिएको छ । त्यसपछि प्रदेश नम्बर ३ मा बढी रहेको देखिएको छ ।
शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा कार्यरत डा. शेरबहादुर पुनका अनुसार डेंगुभन्दा तीसौं गुणा बढी मृत्युदर भएकाले स्क्रब टाइफसलाई डेंगुभन्दा घातक रोगका रुपमा लिइन्छ ।